ထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများ
ယက်မဟုတ်သော သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ...
eco friendly 10g 12g 15g နှင့်...
ယက်မဟုတ်သော ရေစိုခံဆီ pr...
70% isopropyl alcohol ဖြင့် စိတ်ကြိုက် Sterile Medical Alcohol Prep Pad Swab
1. ယက်မလုပ်သောအရက် 70% isopropyl အယ်လ်ကိုဟောဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ဖဲချပ်တစ်ခု
2. သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် မတူညီသောအရွယ်အစားများ
3. လိုအပ်သောနေရာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး တစ်ခါသုံးပြီးနောက် စွန့်ပစ်လိုက်ပါ။
4. မျက်နှာပြင်ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ပြင်ပအသုံးပြုမှုအတွက်သာ အသုံးချပါ။
5. ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ်- 1PC/pouch၊ 100PCS/box၊ 100boxes/CTN
6. Delivery detail: 30% down payment လက်ခံရရှိပြီး 35 ရက်အတွင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အယ်လ်ကိုဟော swabs များ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
သိုလှောင်ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်း အရည်အသွေးအာမခံသည့်နေ့မှစ၍ ငါးနှစ်ကြာသည့်နေ့မှစ၍ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင် သိုလှောင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့ကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ထုပ်ပိုးထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို အရေပြား သို့မဟုတ် အရာဝတ္တုများကို မျက်နှာပြင်ပိုးသတ်ရန်အတွက် ဆေးရုံနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အဓိကအသုံးပြုပါသည်။
တစ်ခါသုံး Non-Woven Round Cap Bouffant Cap
ယက်မဟုတ်သော bouffant round cap ၏ ဤပစ္စည်းသည် မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် ရှည်လျားမှု အတိုင်းအတာ၊ လေထု၏ ကောင်းမွန်သော ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ အန္တရာယ်မရှိသော နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ပါဝင်သည်။မည်သည့်သတ္တုမပါဘဲ၊ ဂေဟစနစ်သဟဇာတဖြစ်ပြီး၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းစေသော အီလက်ထရွန်နစ်စက်ရုံများ၊ နေ့စဥ်ဘဝ၊ ကျောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆေးရုံနှင့် နေ့စဉ်ဘဝ အစရှိသည်တို့အတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
တစ်ခါသုံး ခွဲစိတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သူနာပြု/ဆရာဝန် ဦးထုပ်
ဒေါက်တာဦးထုပ်၊ ယက်မ သူနာပြုဦးထုပ်ဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ပျော့ပျောင်းသော ဦးထုပ်သည် ဦးခေါင်းနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး မည်သည့်ဆံပင်ပုံစံနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ကာ တခါသုံး ဆေးနှင့် အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
Cotton Disposable Non Woven Face Mask
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ တစ်ခါသုံးမဟုတ်သော မျက်နှာဖုံးများ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
၂။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ရူပါရုံနှင့် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံတို့၌ ကောင်းစွာ အာရုံရှိသည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို လေထုထဲတွင် ကူးစက်တတ်သော ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဖုန်မှုန့်အမှုန်အမွှားများမှ လူများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆေးရုံနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
အဖြူရောင် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ရေစိုခံ IV ဒဏ်ရာ ၀တ်စုံ
IV ဒဏ်ရာကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်နှင့် team.waterproof PU Film & Medical acrylate adhesive material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်ကုန်ကို ပေါ့ပါးပြီး နူးညံ့မှုကို သေချာစေသည်။ပိုမိုကောင်းမွန်သော နူးညံ့မှုသည် ဒဏ်ရာကို ၀တ်ဆင်ရန် IV ဒဏ်ရာကို ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသော IV ဒဏ်ရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယက်မဟုတ်သောခွဲစိတ် elastic ပတ်ပတ်လည် 22 မီလီမီတာအနာပလာစတာတီးဝိုင်းအကူအညီ
အနာပလာစတာ (ပတ်တီးဝိုင်းအကူအညီ) ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စက်နှင့် team.PE၊ PVC၊ အထည်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်ကုန်၏ ပေါ့ပါးမှုနှင့် နူးညံ့မှုကို သေချာစေသည်။သာလွန်ပျော့ပျောင်းမှုသည် ဒဏ်ရာကို ၀တ်ဆင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ပလတ်စတစ် (ပတ်တီး) ကို ပေးသည်။ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, ငါတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောအနာပလာစတာ (band aid) အမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ povidone-အိုင်အိုဒင်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု pads များရောင်းရန်ပူပြင်းသည်။
5*5 စင်တီမီတာ အိတ်ထဲတွင် 3*6cm Prep Pad တစ်လုံးသည် 10% Providone lodine solution ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော 1% lodine ဖြစ်သည်။
အိတ်ပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားစက္ကူ၊ 90g/m2
ယက်မဟုတ်သောအရွယ်အစား- 60*30±2မီလီမီတာ
ဖြေရှင်းချက်- 10% Povidone-lodine ဖြင့်၊ 1% Povidone-lodine နှင့် ညီမျှသော အဖြေ
ဖြေရှင်းချက်အလေးချိန်- 0.4g မှ 0.5g
box ၏ပစ္စည်း: ကတ်ထူပြားအဖြူမျက်နှာနှင့်နောက်ကျော mottled;300g/m2
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမြုံထားသော spunlace non ယက်မကော် eye pad
1.High absorbency နှင့် softness
ဒဏ်ရာအရေခွံကို အရောင်လှိမ့်ဝတ်ပြီး အပေါက်မဟုတ်သော ယက်ထားသောအနာကို လိပ်ပါ။
အနာဆေးလိပ်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်နှင့် team.non ယက်လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်ကုန်ကို ပေါ့ပါးပြီး နူးညံ့မှုကိုသေချာစေသည်။သာလွန်ပျော့ပျောင်းမှုက ဒဏ်ရာကို ၀တ်ဆင်ရန် ယက်မထားသောအ၀တ်စကို ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယက်လုပ်မဟုတ်သောအနာကို အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးအတွက် OEM စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း Good Care နဖူးသာမိုမီတာချွတ်
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- 1.Material:PET sheet+liquid crystal 2.Size:16*90mm or die cut 3.Type:forhead thermometer strip 4.Temperature range:35,36,37,38,39,40℃ 5. Display Resolution: 1 ℃ 6. Packing: 1pc/oppbag, 1pc/paper bag, or 1pc/box.7.Features: အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။သတိပြုရန်- ၁။ဤထုတ်ကုန်ကို တစ်ကြိမ်သုံးရန် ကန့်သတ်ထားသည်။2.Pack ပျက်စီးသွားပါက အသုံးပြုရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။3. သက်တမ်းလွန် မသုံးပါနှင့်။4. ၎င်းကိုစုပ်ယူပြီးနောက်အချိန်မီပြောင်းလဲသင့်သည်။အရွယ်အစားနှင့် Package Ma...
ထုတ်လုပ်သူ burn dressing pad facial burning hydrogel burn dressing
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Sterile trauma hydrogel burn dressing၊ ၎င်း၏ စိတ်ကို သက်သာစေသည်၊ ပေါင်မုန့်အတွက် အအေးခံ ဂျယ်၊ ကလေးမျက်နှာ ပူလောင်မှုအတွက် စိတ်ချရသည်၊ ပြင်းထန်သော အပူချိန်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။သတိပြုရန်- ၁။ဤထုတ်ကုန်ကို တစ်ကြိမ်သုံးရန် ကန့်သတ်ထားသည်။2.Pack ပျက်စီးသွားပါက အသုံးပြုရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။3. သက်တမ်းလွန် မသုံးပါနှင့်။4. ၎င်းကိုစုပ်ယူပြီးနောက်အချိန်မီပြောင်းလဲသင့်သည်။အရွယ်အစားများနှင့် ပက်ကေ့ခ်ျ Burncare Specification Pieces/Box Box/Carto 5.030101 3.5g6120 5.030102 5×5 20 16 5.030104 5&#...
ဝက်ခြံအင်္ဂတေငယ်များအတွက် hydrocolloid pimple master patch ကို ဖယ်ရှားခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ဝက်ခြံအင်္ဂတေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်နှင့် အဖွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် သေးငယ်သောအနာများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောစုပ်ယူနိုင်မှုကြောင့် foliicle မှအညစ်အကြေးများကိုသန့်စင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် အရေပြားရောင်ရမ်းမှုကိုလည်းလျော့ပါးစေပြီး အရေပြားကိုညီညာစေပြီး တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကင်းစေပါသည်။ စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းပြီး အနာကျက်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး အမာရွတ်များကို ရှောင်ရှားပါ။ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက်- ပစ္စည်း-အကြည် PE ဖလင်+ကော် အရွယ်အစား- Dia 12mm/8mm အထူ- 0.4mm Package: 1pc၊ 8pcs၊ 12pcs/စာရွက်၊ 36pcs၊ 50pcs/box၊ ...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၇
အမှတ် 118 Xishan တောင်လမ်း၊ Chenji မြို့စက်မှုဇုန်၊ Yizheng မြို့၊ Jiangsu ပြည်နယ်၊ တရုတ်